जे’ल भित्रैवाट चा’ल्र्स शो’भरा’जले मिडियालाई दिए अन्तरवार्ता, पुरै पु’लिस प्र’शा’सनमा भु’इ’चालो !!! « गोर्खाली खबर डटकम
गोर्खाली खवर, एजेन्सी, २४ चैत्र । विकनी कि’लर र सिरियल कि’लरको नामवाट प्रख्यात भएका चाल्र्स शोभराज एक चोटी फेरी चर्चामा छन् । नेपालको जेलमा एक दशक भन्दा वढि समय देखि वसेका कैदी शोभराजको अन्तरवार्ता सवैको अगाडी आएको छ । उक्त अन्तरवार्ता रिलिज भए पछि यहाँको पुलिस प्रशासनको होश उडेको छ । आखिर कसले, कसरी, कहिले जेल भित्र वसेका शोभाराजको अन्तरवार्ता लिए ? धेरै प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपालको गृह मंत्रालयको भनाई अनुसार जेलमा रहेको व्यक्तिको मिडियामा इन्टरभ्यू हुनु गैरकानुनी हो । सेन्ट्रल जेलको जेलरले वीवीसीमा कुराकानी गर्दै शोभराजले जेल भित्रवाट कसरी इन्टरभ्यू दिए, यो पत्ता लगाउन हामीसँग दश दिनको समय छ ।
हुन सक्छ शोभराजले आफ्नो परिवार, आफन्त वा कुनै साथिलाई वोलाएको हो र मिडियालाई इन्टरभ्यू रेकर्ड गराएको हो । अहिले नै यस वारेमा केही भन्न नसक्ने वताएको छ । जेलमा फ्रान्सेली भाषाको अनुवादकको कमिको कारण पनि यस्तो भएको हुन सक्ने दावी गर्छन् । शोभराजले फ्रेन्च भाषा र अंग्रेजी भाषाको मिलिजुली प्रयोग गरे र अनुवादको कमिको फाईदा उठाए इन्टरभ्यू दिए ।
जेलको प्रशासन पनि कैदिहरु वस्ने वैठक कोठाको सिसिटिभि फुटेज चेक जाँच गरिरहेका छन् । जेलको नियम अनुसार ७० वर्ष भन्दा माथिको नेपाली कैदिहरुलाई उनिहरुको राम्रो आचरणको आधारमा जेल मुक्त गर्न सक्छ । फ्रान्सको नागरिक शोभराज भन्छन्, यो प्रावधान विदेशी कैदीहरुमा पनि लागु हुनु पर्छ र आफुले पनि आफ्नो रिहाइको लागि निवेदन दिई सकेको वताएका छन् ।
तपाईहरुको जानकारीको लागि शोभराजको वावु इन्दियन हुन् र आमा भियतनामी हुन् । चाल्र्सलाई ७० को दशकमा भारत, थाइल्याण्ड, टर्की र इरानका २० भन्दा वढी व्यक्तिको हत्याको आरोप लागेको छ । चाल्र्स हिप्पिहरुलाई ज्यादै घृणा गर्थे र उनि आफ्नो लुक्स र पर्सनालिटिको लागि ज्यादै चर्चित भए । शोभराज १९७६ देखि १९९७ सम्म भारतको जेलमा र २००३ वाट नेपालको जेलमा वन्द छन् ।